Opera 65 inoda kubata neFirefox nekuvharira matrackers | Linux Vakapindwa muropa
Opera 65, ikozvino yave kuwanikwa, inoda kubata neFirefox nekuvharira matraki
Mozilla ikambani ine hanya nezve zvakavanzika, kwete zvevashandisi vayo chete, asi nezve rese network. Kune dzimwe shanduro ndizvo ichivharira matracker nekutadza, izvo zvishoma "zvekuwedzera" zvewebhu izvo zvinogadzira chimiro chinoenderana nemaitiro edu ekubhurawuza. Munguva pfupi yapfuura, akaisawo sarudzo yekutsvaga kuti chii chaakavhara, uye ichi chinhu chaakaisawo Opera 65, yazvino vhezheni yeimwe yeanonyanya kufarirwa mawebhu mabhurawuza.
Sezvakatsanangurwa mu kusunungura chinyorwa yeOpera 65, kune mamwe acho vateereri izvo zvakanaka kwatiri uye zvinotitendera kuti tisafanirwa kugadzirisa zvese zvakare nguva dzese dzatinopinda muwebhusaiti, asi mazhinji ane zvimwe zvirongwa. Iyo itsva vhezheni yeOpera ichatipa kudzora kwakawanda pamusoro pevaenzi ava: Iko kukiya basa kwavakaunza muOpera 64 kunogona kuchinjwa mune yakapusa maseturu menyu kana kubva pane zvakajairika zvido. Kana yaitwa, iyo nhovo icon inozoonekwa mune kero bar.
Opera 65 inosanganisira yakagadziriswazve kero bar
Nekuburitswa kweOpera Reborn 3 mwaka wadarika, takaunza chinongedzo chakagadziridzwa chine maficha anosanganisira mwenje nerima tema, zvichikubvumidza kuti ugadzirise bhurawuza rako kumanzwiro ako uye nekubatsira iwe kutarisa kubhurawuza. Nhasi tinoenderera mberi neshanduko dhizaini yeR3 ine itsva nyowani vhezheni yekero bar.
Kana uchiwana iyo kero bar, peji rewebhu ratiri kushandisa rinodzikisa kupenya, zvichitibvumira kuti tione zviri nani zvatiri kutsvaga. Izvo zvinoratidzwa zvachinjawo: mazita emapeji ave kuratidzwa pekutanga, zvadaro ma hyperlink, zvido, uye zvinhu zvidiki. Kune rimwe divi, zvichibva pane zvakataurwa nenharaunda, ivo vakachinja kutaridzika kwevanofarira.
Opera 65 ikozvino iripo yeWindows, macOS uye Linux kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Opera 65, ikozvino yave kuwanikwa, inoda kubata neFirefox nekuvharira matraki
Kugadziriswa kwemidziyo yemagetsi akadaro
Bhurawuza rakanaka, mazuva ano zvakati nonokei uye pane zvinhu zvakaita semifananidzo zvisingaoneke.
Nenzira, unoziva here kana bhurawuza iri riine maapplication uye vanoita shanduko senge Frefox kana Google
Pindura Kugadziriswa Kwemagetsi
Akashinga webhu saiti vhezheni 1.0 yakaburitswa uye pamwe iri default browser muManjaro